Sembana eny Tongarivo : Nahazo fitaovana ahafahany mandeha -
AccueilSosialySembana eny Tongarivo : Nahazo fitaovana ahafahany mandeha
Sembana eny Tongarivo : Nahazo fitaovana ahafahany mandeha
04/12/2017 admintriatra Sosialy 0
Ho fanamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny olona manana fahasembanana, dia tsy nanadino ireo olona sembana eny amin’ny « Maison de la Charité » eny Tongarivo, ny minisitry ny Mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy, Onitiana Realy. Nidina teny an-toerana ny tenany ny andron’ny zoma 1 desambra, nizara « fauteuils roulants » ho an’ireo manana fahasembanana, izay sahanin’ireo masera. Fotoana ho an’ny Ramatoa minisitra nampatsiahy ny lohahevitra napetraky ny firenena mikambana ho an’ity taona ity manao hoe, « Ho amin’ny fiarahamonina maharitra sy faharetana ho an’ny rehetra ». Fotoana ihany koa nanehoan’ny minisitry ny Mponina, ny herim-pony, ny fandraisana andraikitra sy ny fandavantena, ary ny asa fakan-tahaka ataon’ny mpiandraikitra amin’ny ankapobeny sy ireto masera ireto. Ireto farany koa izay tsy nihambahamba namboraka ny olana diavin’izy ireo isan’andro, indrindra eo amin’ny lafiny ara-bola ho fanampiana ny filan’ireo olona manana fahasembanana.
Nisy noho izany, ny fanolorana vary, savony, voa, ravin-damba hanamboarana « couches » ho an’ireo sembana, fa indrindra ny « fauteuils roulants ». Nanambara moa ny minisitra Onitiana Realy fa, « ny minisiteran’ny mponina dia miahy ny sosialim-bahoaka hatrany, ary manao izay tratran’ny heriny sy araka ny vitany mba hiantohana ny anjara asany, ho fanamorana sy fiahiana manoloana ireo olona manana fahasembanana, eto sy manerana ny Nosy.».Marihina fa lehilahy, vehivavy, tanora ary olon-dehibe miisa 63 manana fahasembanana ara-tsaina sy ara-batana no raisin’ny ivon-toerana « Maison de la charité » miisa 3 mandra-pahafatiny. Ka 12 isa amin’ireo dia eny Andohatapenaka, eny Ambanidia ny 16 ary eny Tongarivo ny 35 isa.
Nankalazaina omaly ny andro iraisam-pirenena ho an’ny olona manana fahasembanana. Ho an’ity taona ity, dia ny tanànan’i Fianarantsoa no hanamarihana izany amin’ny fomba ofisialy. Nisy ny fihaonana ara-panatanjahantena, izay efa nanomboka ny 29 novambra teo. Eo koa ny fifaninanana dihy, hira sy fialam-boly mahaliana, ary ny fifanakalozan-kevitra. Filaharambe manerana ny tanàna sy fampirantiana ary « showbusiness » kosa no nanamarihana izany ny sabotsy 2 desambra. Nitohy tamin’ny filatroana, fampisehoana taovolo, sy fandroahana kosa izany avy eo.